Qaar ka mid ah astaamaha cusub ee Plasma2 [KDE SC] | Laga soo bilaabo Linux
Qaar ka mid ah wararka ku sugan Plasma2 [KDE SC]
Waxaan inbadan fahmay in desktop-ka ugufiican GNU / Linux Aniga ahaan, kan ugu casrisan iyo midka sida ugufiican baahiyaheyga shaki la’aan KDE SC.
Waxay leedahay horumar xasilloon iyo xulashooyin aad u xiiso badan oo ka dhiga mid gaar ah, maahan oo keliya gudaha GNU / Linux, laakiin marka la barbar dhigo inta kale ee Nidaamyada Howlgalka.
Warka oo ay ku jiri doonaan Plasma 2 aragtidayda xaqiiji, maxaa yeelay wixii ka baxsan Muuqaalka farshaxanka taas oo wax badan hagaajin doonta, daboolka hoostiisa fursado aad u xiiso badan ayaa la diyaariyey.
Isbeddelada imanaya, midka sida aadka ah ii soo jiitay wuxuu ahaa Baloo, matoor cusub oo macne ah oo bedelaya Nepomuk. Tan dambe, in kasta oo ay si weyn uga soo hagaagtay KDE 4.11, maahan ikhtiyaarka ugufiican ee lagu gaari karo Semantic Desktop sidii Eebbe ugu talo galay.
Taasi waa sababta Baloo Waxay u timaadaa inay bedesho iyada oo rajo galinaysa kaliya tilmaamid dhakhso badan, laakiin sidoo kale horumar la taaban karo oo ku saabsan waxqabadka iyo isticmaalka CPU. Waxay sidoo kale ka imaan doontaa Milou (sharafta eyga caanka ah ee Tintin), codsi cusub oo lagu raadsado desktop-ka.
Tallaabo kale oo muhiim ah ayaa ah taageerada Wayland, kaas oo noqon doona mid ka mid ah tiirarka Plasma 2 oo howsha culus ee ay qabtaa tahay in la sameeyo KWin istaag (xitaa inbadan) inta kale Maareeyayaasha Daaqadaha.
Haddii aad u malaynaysay inay wax walba halkan ku dhammaadeen, markaa taas ogow KDM waa la joojinayaa Duugoobay Maamulaha kal-fadhiga sida muuqata waa sababta keentay in bilowga KDE in qayb ahaan laga gaabiyo. Beddelka? Waa hagaag LightDM o SDDM waxay kujiraan iftiinka.
Waxaas oo dhan iyo in ka badanba waxay ahaayeen wixii lagu kariyey Xafiiska BlueSystems gudaha Spain laga bilaabo Janaayo 10 ilaa 16.
Xigasho iyo macluumaad dheeri ah: Blog-ka KDE
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Qaar ka mid ah wararka ku sugan Plasma2 [KDE SC]
Waan ku faraxsanahay kdm iyo nepomuk xd
Aad u culus dhadhankayga! xD
Haddii aad leedahay VGA 32MB waan fahmay.
Waayahay Ugu yaraan waxay ahayd waqtigii wax la khafiifin lahaa.
Kaliya waxaan qabaa su'aal, maxaa yeelay haddii sawirka aad ku aragto in mid ka mid ah horumariyeyaasha KDE uu adeegsanayo google chrome ama chromium, ma garanayo, sababta cadaabta aysan uga caawinaynin inay dhexgalaan dhammaan nidaamka nidaamka ??? ???
Aan ku xusno Firefox, oo aan u maleynayo inay tahay tan sida ugu wanaagsan bilicsanaanta ugu samaynaysa KDE.
Dhinaca kale waan ku faraxsanahay inay ka hadlayaan waxbadan oo horumar ah oo ku saabsan desktop-ka oo aan aad u jeclahay (wax isku mid ah ma ahayn markii aan lumiyay Gnome2)
Ku jawaab Leviatan
Waxay ka dhihi karaan isla wax ku saabsan nidaamka qalliinka ee aad ka daabacayso ..- «Sababtoo ah, haddii ay jiraan xalal sida kde oo loogu talagalay dad badan oo ka faa'iideysanaya, isticmaaleyaashu kuma darsadaan ugu yaraan isticmaalka? «
Chromium-kayga wuxuu si fiican ugu muuqdaa KDE. Kaliya waa inaad haysataa Oxygen GTK, iyo goobaha mawduucyada GTK, dhaqaajiso ogsijiin-gtk. Chromium-ka waxaad dooraneysaa inaad isticmaasho mawduuca GTK waana intaas.
Haddii aad isticmaashid ogsijiin-gtk, xitaa Firefox ayaa si fiican kuugu muuqanaysa, oo aan lagu xusin Libreoffice, oo ra'yigeygu u muuqdo mid qurux badan oo ku saabsan mawduucaas.
ku dar dijo
Waan ku raacsanahay gabi ahaanba!
Taasi waa sida aan u isticmaalo oo muuqaalka muuqaalka ayaa ugu fiican!
Ku jawaab anadve
Aad u xiiso badan, waxaad igu qancinaysaa inaan dib ugu laabto KDE ASUS-kayga oo aan uga tago gacaliye Xfce kombuyuutarradaydii hore !!!!
PS: Milou Uma maleynayo inuu yahay eeyga Tintin, ee waxay u egyihiin sida Baloo iyo Milou oo ka socda Buugga Jungle !!!!
Ku jawaab danesc87
Hadda markaan gartay inay tahay Mowgli !!!!
Waa maxay dameer, qaladkeyga 😛
Ma aanan ka aqoon baloog, ma jiro macluumaad badan oo ku saabsan.
Runtu waxay tahay in nooca soo socda ee kde uu u muuqdo mid rajo badan leh, gaar ahaan waxay ku sameynayaan kdelibs, waxay wax badan ka caawin doontaa kuwa kale ee qt horumariya.
Waan ku necbahay adiga, waxaan uun ku dhacay xD cabsi welwel aan horay loo arag
welwelku xaq maahan ama inuu cunno ahaa
aniga haa, waan jeclahay shaqada wiilashan
Maxaad ugu yeertaa nerd? xD
Inta aan ogahay, tete maahan mid lidka ku ah bulshada sida kuwa kale.
Waan ku fahmay Tete, waan ku fahmay U_U
Waad ku mahadsan tahay macluumaadka. Wuxuu ka ogaa Milou laakiin ma uusan ogeyn Baloo. Waxay soo jiidanaysaa dareenkeyga maxaa yeelay Nepomuk wuu duulayay illaa iyo hadda, in kastoo aysan ahayn waxa la filayay oo dhan, waxay ahayd mid ka mid ah tiirarka waaweyn ee KDE SC. Waxa kale oo jira Orodyahan badali doona Krunner, marka Milou waa inuu inbadan isbadal muujiyaa hadii aysan dooneynin inay iskudayaan dadaalada. Waxaan la yaabanahay waxa kale ee ay tahay in laga beddelo KDE si ay ugu dambayntii u noqoto, ka hor dadweynaha guud, muraayadda kama dambaysta ah ee in badan oo horeba u ahayd? In kasta oo aan markasta garwaaqsanno in la horumarin karo.
Waa maxay xafiisyada quruxda badan ee KDE ku leedahay Spain.
Madaxu wuxuu adeegsadaa MacBook .. !!
Ku jawaab Marcial del Valle
Waxaan isku dayay KDE (Kubuntu) muddo bil ah, xaqiiqdii aniga ima aysan helin, waxay leedahay waxyaabo wanaagsan, laakiin ma aanan jeclayn, waxay kugu daadinayaan ikhtiyaarro markii aad raadineysid ikhtiyaar aasaasi ah waa inaad raadiso irbadda cawska dhexdiisa, laakiin waxaan ka jeclahay Qt in ka badan Gtk waxaan barnaamij ka dhigay 2-da oo waxaan la joogayaa Qt, marka la soo gaabiyo waxaan jeclaan lahaa qaabka gnome-ka (ma ahan qolof) laakiin waxaan doorbidaa maktabadaha Qt, waxaan rajeynayaa in maalin maalmaha ka mid ah XFCE ay u haajiraan Qt maahan Gtk, laakiin dayactirka qaab u eg ama la mid ah Mint.
Ku jawaab camux
Shaki la'aan mustaqbalka Linux wuxuu kujiraa KDE, waxaan jeclaan lahaa inaan arko Wayland oo dhaqso loo hirgaliyo !!! Jubilen ugu dhakhsaha badan Xorg, sidoo kale go'aanka wanaagsan ee horumariyayaashu inay joojiyaan KDM aniga ahaan waxay ahayd waxoogaa fool xun! Iyo wax kale markii KDE Frameworks 5 soo baxayo maxaa yeelay Mashruuca Neon wali wuu la socdaa cilado badan ... Faahfaahin fiican ayaa jirta!
Wanaagsan maamulaha kalfadhiga, cilladaha ugu weyn ee KDE waa waqtiga ay qaadato in lagu rakibo desktop-ka.
Sidee u fiicantahay in KDE la sii wanaajiyo xitaa in ka badan, maadaama ay tahay desktop-ka aan jeclahay oo sida elav u sheegay ay wax badan soo hagaagtay dhawaanahan, taas oo iga dhigtay inaan ka tago midnimada iyo gnome3, hubaal waxaan aadayaa KDE, ee horey u soco KDE, Salaan
Ku jawaab xaabada dabka
Thanks to @elavdeveloper waxaan gnome2 u bedelay KDE maxaa yeelay qorfaha iyo lamaanaha wali waxay umuuqdaan kuwo aan u bislaan dhadhankeyga, aan dhaho, laakiin waxaan rajeynayaa inaan isku dayo daqiiqad 2014 LTS ah. Waxa aan ka jeclahay Linux waa noocyo kala duwan.
Waxaan qiranayaa dambiga hadii loo baahdo U_U
Waxaan jeclaan lahaa inaan ka shaqeeyo xafiiskaas 😀 C ++ iyo Qt maalinta oo dhan 😛
XEERARKA TODOBAADKA !!
Muxuu cadaabta faallooyinkaasi ku leeyahay soo gelitaanka maqaalka?
Isla waxaan iri. Linus Trovals wuxuu u adeegsadaa Fedora barnaamijka 'MacBook Pro', qofna lama yaabin.
Kala soco fiidiyowyada tooska ah ee YouTube-ka ee Linux oo leh quvi
Ku hel ogeysiis emayl marka qof u helo asalka SSH